के कारणले सुशान्तको मृ’त्यु भयो? अन्तिम पो’स्ट’मा’र्टम रिपोर्टले खुलायाे यस्ताे र’हस्य । – Jagaran Nepal
के कारणले सुशान्तको मृ’त्यु भयो? अन्तिम पो’स्ट’मा’र्टम रिपोर्टले खुलायाे यस्ताे र’हस्य ।
एजेन्सी बुधबार, आषाढ १०, २०७७
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको मृ’त्युपछि पुलिसले प्रारम्भिक का’र’बा’ही गरी आ’त्मह’त्याको मु’द्दा सुरू गरेकाे छ । त्यसपछि, प्रारम्भिक पो’स्ट’मा’र्ट’म रिपोर्टमा, सुशांतको मृ’त्युलाई आ’त्म’ह’त्या पनि भनियो। पुलिसलाई सुशान्त केसमा अन्तिम पो’स्ट’मा’र्टम रिपोर्ट पनि दिइयो। त्यो रिपोर्टमा सुशांत सिंह राजपूतको मृ’त्यु’सँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बताइएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सुशांत सिंह राजपूतकाे झु’ण्डिएर निधन भएको थियो। अभिनेताको भिसेरा पनि रासायनिक जाँचको लागि राखिएको छ। यो भनिएको छ कि यसभन्दा पहिले अस्थायी पो’स्ट’मा’र्टम रिपोर्ट तीन डाक्टरले हस्ताक्षर गरेको थियो, जबकि अन्तिम रिपोर्ट पाँच डाक्टरले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो रिपोर्ट तयार गर्दा धेरै तयारी गरिएको छ।
उक्त रिपोर्टमा सुशांतको शरीरमा कुनै बाह्य चोटपटक नभएकोमा जोड दिइएको छ। उनकाे नासाहरु पनि एकदमै सफा थियो। पो’स्ट’मा’र्टम रिपोर्टमा सुशांतको मृ’त्युको कारणलाई आ’त्मह’त्या गरिएको बताइएको छ। रिपोर्टले अभिनेताको मृ’त्युको कारणमा कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठाउँदैन।
मुम्बई प्रहरीले पनि आफ्नो कार्यमा धेरै खुलासा गरेको छ। पहिले सुशांतको मृ’त्यु पूर्व प्रबन्धक दिशा सालियनको निधनसँग जोडिएको देखिन्थ्यो। तर पुलिसले अब त्यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध अस्वीकार गरेको छ। पुलिसका अनुसार दिशाले सुशान्तलाई मात्र एकपटक भेटिसकेको थियो, त्यसैले यो कुरा थप्न सकिन्न। यसैबीच, पुलिसले क्रो’ध व्यक्त गरेको छ कि धेरै वेबसाईटहरूले सुशान्तको मृ’त्युको बिभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन जुन कुनै कडा प्रमाण बिना नै छ। समाचारका अनुसार यी वेबसाईटहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको तथ्यलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ।
पुलिस का’र’बा’ही’को बारेमा कुरा गर्दै, २ व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सोधिएको छ। अभिनेताको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको बयान पनि रेकर्ड भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुलिसले हालसम्म रिया चक्रवर्ती, व्यवसाय प्रबन्धक, पीआर प्रबन्धक कुशल जावेरी जस्ता धेरै व्यक्तिको बयान रेकर्ड गरेको छ। यी सबै व्यक्तिहरू सुशांतसँग नजिक भएको मात्र नभइ उनको करियरसँग पनि गहिरो सम्बन्ध भएको छ। आजतकबाट अनुवाद